Mbola lavitry ny afo ny kitay | NewsMada
Mbola lavitry ny afo ny kitay
Zazavavikely vao herintaona sy tapany, hita nitomany tao anaty lava-drano, tao amin’ny fkt Fitomilasy, Bevokatra, kaominina ambonivohitra Antsirabe. Zazavavikely fito taona, maty voafaokan’ny taxi-be, tetsy Andavamamba. Tany Manakara, adin’ny olon-dehibe niafara tamin’ny fahafatesana zaza vao roa taona sy tapany monja, maty voakapa tamin’ny antsy… Lava ny lisitra. Tsy ela akory fa vao tamin’ity herinandro ity no nisehoan’ireo tranga mampalahelo, tena mamohehitra maneho fa mbola lavitry ny afo ny kitay, raha ny momba ny fiarovana ny zon’ny zaza sy ny ankizy, eto Madagasikara. Asa na fifandrifian-javatra na ahoana fa ao anatin’ny herinandro nankalazana ny faha-30 taonan’ny Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon’ny zaza (Fizoza), ny talata 19 novambra 2019 no nisehoan’ireo tranga ireo.
Iray amin’ireo zo fototra miisa dimy, voarakitra ao anatin’io Fizoza io, ankoatra ny hoe zo hanana anarana sy firenena, zo ho salama, zo hianatra, zo handray anjara, ny zo ho fiarovana ny zaza. Fiarovana ahafahana misoroka ny herisetra amin’ny endriny samihafa (fanararaotana ara-nofo atao ho fahazoam-bola, fampiasana ny ankizy tsy ampy taona, ny fomba amam-panao mitera-doza…). Voatsiahy hatrany isan-taona, isaky ny volana novambra tahaka izao, ity Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon’ny zaza (Fizoza) ity, fa moa ve tena misy ny fampiharana, ny fanajana sy ny fanaraha-maso ? 30 taona aty aoriana, mbola izao hiaraha-mahita sy miaina izao ny zava-mitranga momba ny fiarovana ny zon’ny zaza sy ny ankizy malagasy.
Manao ezaka araka izay azony atao ihany ireo fikambanana mivondrona ao anatin’ny tambajotran’ny fiarahamonim-pirenena misehatra momba ny fiarovana ny zon’ny zaza sy ny ankizy, saingy voafetra. Noho ny hoenti-manana… Inona, ahoana, aiza ny mba anjara andraikitry ny fitondram-panjakana, izay tsy afa-miala amin’izany. Ny fanjakana, izay tsiahivina fa anisan’ireo firenena maro manerana izao tontolo izao nanao sonia fa hanaja sy hampihatra ity Fizoza ity, 30 taona lasa izay. Mbola tena lavitry ny afo tokoa ny kitay.